Xarumaha Doorashooyinka Oo Barito Bilaabaya Hawlahoodii Shaqo. - Cakaara News
Xarumaha Doorashooyinka Oo Barito Bilaabaya Hawlahoodii Shaqo.
Jigjiga(CN) Abaco.Jan.07.2015, Doorashada 5aad ee dalka iyo deegaanada Itoobiya oo dhacaysa 4 bilood kadib ayaa waxaa guud ahaanba ladhamaystiray diyaar garowgii iyo qorshayaashii doorashada. Xisbiga talada haya ee EPRDF waxaa uu diyaariyay qorshe iyo istaraatiijiyad ku aadan doorashada islamarkaana hirgalinaysa sidii ay u noqon lahayd doorasho nabadgalayo iyo cadaalad ku dhamaata.
Waxaa maalinta bari ah bilaabmaya furitaanka xarumaha doorashooyinka iyo shaqooyinkoodii habsami usocod ee doorashada. Sida uu sheegay bordhiga doorashooyinka qaran ee Itoobiya waxaa ay xarumuhu bilaabi doonaan jimcaha fooda inagusoo haya oo ku aadan 1 bisha Tir diwaan galinta.
Doorashadan ayaa kaga duwan kuwii hore wakhti uu dhamaaday qorshihii shanta sano ee isbadalka iyo kobaca dhaqaalaha iyadoo loo gudbayo qorshaha labaad ee isbadalka iyo kobaca dhaqaalaha.
Dhinaca kale doorashadan ayaa ah mid ay shacabka iyo xisbiga EPRDF khibrado badan kaleeyihiin doorashooyinkii hore wuxuuna xisbigani leeyahay kalsooni iyo taageero baaxad wayn oo uu lahortago shacabka.